Cristiano Ronaldo oo laga qaaday kabta dahabka ah ee Talyaaniga, taasoo ka dhigan in afar xilli ciyaareed oo xiriir ah uusan CR7 ku guuleysan gooldhalinta La Liga iyo Serie A – Gool FM
(Turin) 27 Maajo 2019. Cristiano Ronaldo ayaa laga aaday xilli ciyaareedkan kabta dahabka ah ee horyaalka Talyaaniga, taasoo ka dhigan in xilli ciyaareedkiisii afaraad oo xiriir ah uu ku guuleysan la’yahay gooldhalinta La Liga iyo Serie A.
Kabtanka xulka qaranka Portugal iyo kooxda Juventus Ronaldo waxa uu ka soo muuday kaalinta afaraad ee kala sarreynta gooldhalinta horyaalka Talyaaniga ee Serie A, waxaana ku guuleystay kabta dahabka ah xilli ciyaareedkan Fabio Quagliarella, kaddib markii uu dhaliyey 26 gool weeraryahanka kooxda Sampdoria.
Zapata oo kooxdiisa Atalanta ka caawiyay inay markii ugu horeysay taariikhda u soo baxaan Champions league ayaa kaalinta labaad galay kaddib markii uu 23 gool dhaliyey.
Weeraryahanka Paitek oo 22 gool u dhaliyey kooxaha Genoa iyo AC Milan oo uu u dheelay intii lagu guda jiray xilli ciyaareedkan ayaa kaalinta saddexaad ka galay gooldalinta Serie A.
Cristiano Ronaldo ayaa kaalinta afaraad ka soo muuqday kaddib markii uu xill ciyaareedkan oo ahaa kiisii ugu horreeyey uu 21 gool u dhaliyey kooxdiisa Juventus.
Ma’ahan markii ugu horreysay ee uu Ronaldo ku guuleysan waayo gooldhalinta horyaalka marka dib loo eego xilli ciyaareedkan haatan dhammaaday, laakiin saddexdii xilli ciyaareed ee midkan ka horreeyey uu seegay ku guuleysiga kabta dahabka ah ee gooldhalinta horyaalka La Liga.
Taasi waxa ay ka dhigan tahay in CR7 uu markii afaraad oo xiriir ah ku guuldarreystay inuu hanto kabta dahabka ah ee gooldhalinta horyaallada La Liga iyo Serie A.
Cristiano Ronaldo ayaa xilli ciyaareedkan dhammaaday uu u yahay kii uu goolasha ugu yaraa dhaliyey tan iyo kal ciyaareedkii uu ka soo tagay naadiga Manchester United.
Haddaba halkaan hoose ka eeg sida Ronaldo looga qaaday afarta xilli ciyaareed ee xiriirka ah kabta dahabka ah ee horyaallada La Liga iyo Serie A:-
2015-16: Luis Suarez (40 gool), Cristiano Ronaldo (35 gool)
2016-17: Lionel Messi (35 gool), Cristiano Ronaldo (25 gool)
2017-18: Lionel Messi (37 gool), Cristiano Ronaldo (25 gool)
2018-19: Fabio Quagliarella (26 gool), Cristiano Ronaldo (21 gool)